Mavoloha, mavo vava… | NewsMada
Mavoloha, mavo vava…
Par Taratra sur 07/01/2017
Sao tsy mifankahazo ny resaka? Mavo loha no niavian’ny hoe Iavoloha. Foko iray avy eny Andoharanofotsy nitaon-tany anaovam-biriky teny no nahavery anarana an’i Mavoloha: mavo loha tamin’ny fitaoman-tany ny olona. Mavoloha hatrany no niantsoana io tanàna io hatramin’izay.
Nony vita ny lapam-panjakana, novain’ny mpitondra ho Iavoloha i Mavoloha. Silaka rahateo ny takela-panondrona lalana teny an-toerana: ny Mavoloha lasa hoe Iavoloha, rehefa simaka ny “M”. Nihevitra ny maro, indrindra ny tsy mahalala ny tantara, fa Iavoloha tokoa i Mavoloha.
Ary ny “mavo vava”? Ireo mahantra, tratran’ny mosary: mavo vava, mitrongy vao homana. Mavo vava koa ireo tsy mahatanteraka ny teny nomeny, araka ny filazan’ny depiote iray tamin’ny fifanatrehan’ny Antenimierampirenena sy ny governemanta teny Tsimbazaza, ny 15 desambra 2016.
Eo indrindra ny resaka eto: tsy masim-bava fa mavo vava amin’izay lazainy i Mavoloha, na milela-molotra toy inona aza: mamafa ny fahadisoana na manamarina sy manadio tena. Nahoana? Tsy misy tanteraka tsinona izay lazaina. Ampy itsarana ny fomba fiasa izay telo taona izay.
Lazaina fotsiny itsy sy iroa ho fampandriana adrisa, fa tsy tanterahina… Raha misy aza izany: fikatsahan-tombontsoa manokana ambadika, na isehoana ho manao sy mahavita, na ilan-tsitraka amin’ny vahiny hanamarinana ny vola atsy sy aroa… Marina ve izany sa ahiahy tsy ihavanana ihany?
Eo ny vahoaka mitsara: iza no tena mavo vava amin’ny tsy fanatanterahana izay lazaina? Delestazy hoe foana ao anatin’ny telo volana, ohatra: telo taona, tsy afaka. Tsy hita izay ady amin’ny kolikoly, fa izay akaiky ny tena ao an-dapa ihany no mampikoy ny ambanilanitra ho tsimatimanota…
Saika toy izany avokoa ny hoe fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly… Mbola inoan-teny amin’izay lazainy? Mila fandinihana amin’izao fiandohan’ny taona izao. Ny latsaka am-po, tsy hamelona; ny imolotra indray no holelafina… amin’izay mavo vava na loha?
Kabary zato, teny arivo; iray ihany no marina: izay asa vita raha hita?